La Qosol: Caadooyinka maseerka “Naa makii isku shumi jirey?
You are here: Category Blog La Qosol: Caadooyinka maseerka “Naa makii isku shumi jirey?
La Qosol: Caadooyinka maseerka “Naa makii isku shumi jirey?	Tuesday, 13 December 2011 11:38	Daadir	Hits: 5242	Beribaa waxaa mudo 30-sano ah nolowadaag ahaay nin iyo naagtii ninka waxaa la’oranjirey Cabdi haweeneydana Barni. Cabdi iyo Barni wax caruura iskuma dhalin mudo badana waa isqabeen balse taasi waa qadarta allah iyo imtixaanka aadama lagu tijaabinayo samarkooda iyo imaankooda. Sikastaba ha ahaatee nin kii Cabdi ahaay wuxuu goaan kugaarey inuu reer kale yeesho isla markaasna uusan Barni usheegin oo uu kaqariyo. Oday cabdi laftirkiisu maeheyn nin caqlibadane wuxuu xabad kahelay deriska isla mar ahaantaasna wuxuu rabaa inuu Barni agteeda ku aqalgalo. Habeen habeenada kamid ah isla markaasna ah habeenkii uu oday Cabdi aqalgelayey ayaa Barni labo islaamood oo saxiibadeed ah u yimaadeen markaasbey kuyiraahdeen Naa miyaada Arooska Aadeynin. Barni oo aan waxba kawarheynin ayaa islaamihii kutiri:oo yaa aroosaya markaasbey ku yiraahdeen dee Cabdi iyagoo u maleeya in barni ay lasocoto Aqalgalka Oday Cabdi balse ay iska kaftameyso. Markaasbey Barni tiri oo Cabdigee baa aroosaya” markaasbey ku yiraahdeen dee Cabdigii kuqabey. Maseer dumar iyo caadadiisi Barni waxey soo xasuusatay Ceeb uu cabdi lahaay oo 20-sano kahor dhacday taasoo aheyd Calool xanuun ku dhacay 20-sano kahor.
Markaasbey tiri “Naa ma’kii isku shumi jirey “Naa kaasi wuu isku shubmaa ye muxuu kaguursan”oo shubanka iyo Arooska maxaa iska galay cakuye biniaadanka iyo Maseer wax aan meesha oolin unbuu afku kaasoo dafi…
wlh waa sheeko qosol badan dumar hadaan nahay wanaaga waxaan ku ilaawnaa halqalad uu kaa galo seygagaga!